एकैपटकमा १० सन्तान लाई जन्मदिदैँ यी महिलाले राखिन बिश्व रेकर्ड (भिडियाे हेर्नुस्) - NaulooDhun
June 10, 2021 adminLeaveaComment on एकैपटकमा १० सन्तान लाई जन्मदिदैँ यी महिलाले राखिन बिश्व रेकर्ड (भिडियाे हेर्नुस्)
एकैपटकमा १० सन्तान लाई जन्मदिदैँ यी महिलाले राखिन बिश्व रेकर्ड (भिडियाे हेर्नुस्) । दक्षिण अफ्रिकाका ३७ वर्षीया महिलाले एकैपटकमा १० जना बच्चालाई जन्म दिएकी छन् । एकैपटकमा एक महिलाले १० शिशु जन्माएर विश्व रेकर्ड राखेकी छन् ।
यद्यपि दक्षिण अफ्रिकी सरकारले भने यस विषयमा अझै तथ्य रेकर्ड भेटिन बाकिँ रहेको जनाएको छ । राजधानी प्रेटोरियाको एक अस्पतालमा गोसिएम थमारा सिथोल नामकी महिलाले तीन छोरी र सात छोरालाई एकैसाथ जन्म दिएको बताइएको छ । ती महिला पहिले पनि जुम्ल्याहा सन्तानकी आमा थिइन् ।
यसैबीच यतिबेला सितहोलले गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड राखेको भनेर चर्चा चलेको छ। हालसम्म विश्वमा ९ सन्तानको मात्र एकैपटक जन्म भएको रेकर्ड थियो। सो रेकर्ड मालीयन हालिमा सिसेको नाममा छ। मोरोक्कोकी उनले गत महिना मात्र ९ सन्तानको जन्म दिएकी थिइन् ।
सिटहोलले स्थानीय मिडियासँग कुरा गर्दै आफ्नो गर्भावस्थालाई लिएर आफैं चकित भएको बताइन् । द सनको रिपोर्टअनुसार उनका सबै बच्चा पूर्ण रुपमा स्वस्थ भएको बताइएको छ । बच्चाहरुलाई आगामी केही महिनासम्म इन्क्युबेटरमा राखिनेछ । सिटहोलले प्राकृतिक रुपमै गर्भधारण गरेकी थिइन् । गर्भावस्थाको क्रममा आफूलाई निकै असहज भएको उनले बताइन् । भिडियो:-
आफ्नै श्रीमानले श्रीमतीको छा,तिमा टो,केर तड्पाइ त,ड्पाइ मा रे|घ,टनास्थल पुग्दा बाहिरियो ड रलाग्दो रहस्य|।
कति नि’र्दयी आमा ज’न्मन नपाउँदै आफ्नो सन्तान लाई ज’मीन मु’नि गा’डि’न : ३ दिन पछि श’व फेला
प्रधानमन्त्री ओली वि,रुद्ध ग,र्जिए विप्लव ! त,त्काल निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी !!